सहस्राब्दी परिवारहरू COVID चिन्ताहरूको बाबजुद अझै यात्रा गरिरहेका छन्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » जिम्मेवार » सहस्राब्दी परिवारहरू COVID चिन्ताहरूको बाबजुद अझै यात्रा गरिरहेका छन्
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • cruising • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • लक्जरी समाचार • समाचार • रेल यात्रा • रिसोर्ट्स • जिम्मेवार • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
परिवार यात्रा यात्रा र पर्यटन रिकभरी मा एक गम्भीर खेलाडी हुन सम्भावना छ
सर्वेक्षणको 97%% उत्तरदाताहरू COVID-१ about को बारेमा चिन्तित छन् जब यो यात्राको कुरा आउँदछ
लकडाउन र सामाजिक अलगावको एक वर्षको अवधिमा, परिवारहरूले सामना गर्ने संयन्त्रहरू फेला पार्न आवश्यक पर्‍यो
सर्वेक्षण लिखित दुई तिहाई उत्तरदाताहरूले COVID-१ p महामारीको अवधिमा यात्रा गरे
“जब हामी COVID को बारेमा चिन्तित छौं, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हामीसँग बाँच्नको लागि केवल एउटा जीवन छ। सकेसम्म धेरै सावधानी अपनाउन प्रयास गर्दा हामी अझै यात्रा गर्ने निर्णय गरिरहेका छौं। सामानहरू मेटाउनुहोस्, हाम्रो मास्क लगाउनुहोस्, आफ्नो हात धुनुहोस्, गन्तव्यमा पुग्ने बित्तिकै लुगा फेर्नुहोस्, ताकि हामी स्थानीयहरू आदिलाई संक्रमित नगरौं। ”बाबा भ्वेजका सदस्य क्रिष्टिन बर्नहम भन्छिन्।
भर्खर सम्म, यात्राको लागि यो पेन्चन्ट भन्नाले वर्जित हुन सक्छ। यद्यपि मार्च २०२१ मा सर्वेक्षण गरिएको एक सर्वेक्षणले यो कुरा बतायो कि यो व्यापक प्रवृत्ति हो।
सर्वेक्षणको 97%% उत्तरदाताहरू धेरै चिन्तित वा केही चिन्तित छन् COVID-१ about को बारेमा जब यो यात्राको कुरा आउँदछ, तर ती मध्ये दुई तिहाइ महामारीको दौरानमा यात्रा गरे। आधा भन्दा बढी घर बाट कम्तिमा एक हप्ता टाढा खर्च भयो, सबैभन्दा लामो यात्राको साथ 19 days दिन टाढा छ!
यो महामारीको यात्राको प्राथमिक प्रेरणा के हो भनेर सोध्दा, %२ %ले विश्राम लिनुभयो भने, %१% ले परिवार र साथीहरूलाई भेट्न आएका प्रतिक्रिया देखाए र १%% ले नयाँ गन्तव्य पत्ता लगाए।
त्यसोभए यसले हामीलाई के बताउँछ? लकडाउन्ड र सामाजिक अलगावको एक वर्षको अवधिमा परिवारहरूले नक्कली संयन्त्रहरू भेट्टाउनु आवश्यक पर्‍यो। र दृश्यहरूको परिवर्तन पाउन महत्वपूर्ण देखिन्छ। यसको मतलव पारिवारिक यात्राको यात्रा र पर्यटन रिकभरीमा गम्भीर खेलाडी हुन सक्ने सम्भाव्यता छ, जस्तो कि म्याकन्से र एसेन्चर उद्योग रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको छ। Cons%% लाई यात्राको लागि पैसा बचत गर्नु आवश्यक पर्दैन र %०% ठूलो यात्रामा जान चाहान्छन् किनकि तिनीहरूसँग पहिले नै पैसा छ, यस खण्डलाई वेवास्ता गरिनेछैन।
परिवारको एक तिहाइले मे २०२१ को आउँदो यात्रा र जून सेप्टेम्बर २०२१ को आधा आधा योजनाको योजना बनाइरहेकाले परिवारका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सक्ने गन्तव्यहरू जित्ने सम्भावना छ।
अधिक आश्चर्यजनक रूपमा, परिवारहरू अधिक प्रकृति र बाहिरी गन्तव्यहरू खोज्दैछन्। यद्यपि 70०% ले राम्रो स्वास्थ्य देखभाल पूर्वाधार भएका गन्तव्यहरू पनि खोजिरहेका छन् र उच्च COVID खोप दरको साथ गन्तव्यहरू प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
यदि पर्यटन बोर्डहरूले यो जानकारी सजिलैसँग पहुँचयोग्य बनाउँदछ भने, उनीहरूले केहि आगन्तुकहरूलाई जित्न सक्ने सम्भावना छ। विशेष गरी पछिबाट %१% गन्तव्यमा जान चाहान्छन् उनीहरू पहिले कहिल्यै आएका छैनन्।